विवाहपछि किन मोटाउछन् युवती ! यस्ता छन् केही कारणहरु… जुन सुन्दा अचम्म लाग्छ … – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/विवाहपछि किन मोटाउछन् युवती ! यस्ता छन् केही कारणहरु… जुन सुन्दा अचम्म लाग्छ …
विवाहपछि किन मोटाउछन् युवती ! यस्ता छन् केही कारणहरु… जुन सुन्दा अचम्म लाग्छ …
सामान्यतया अपवाद बाहेक अधिकांश युवतीहरु विवाहपछि मोटाउँछन् । आखिर किन त ? यो विषयमा थुप्रै खोज तथा अनुसन्धान भएका छन् । आज हामीले त्यही खोजबाट पत्ता लागेको तथ्य यहाँ उल्लेख गरेका छौं।फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानको नतिजा अनुसार विवाह पछि थुप्रै महिला र पुरुषको तौल तेज रुपमा बढ्ने गर्दछ ।
यस्तै अर्को एक अन्य अनुसन्धानका अनुसार विवाहको ५ वर्षभित्र करिब ८२ प्रतिशत जोडीको तौल ५ देखि १० किलो बढ्ने गर्दछ ।आखिर किन बढ्छ त तौल ? हेर्नुहोस् केही तथ्यहरुः
(१) हर्मोनल चेन्ज : अध्ययन अनुसार, विवाह पछि शरीरमा हर्मोनल परिवर्तन हुने गर्दछ । यसले गर्दा युवतीहरुको तौल बढ्न थाल्छ । (२) निन्द्रा नपुग्नु : विवाह अघि भन्दा पछि युवतीहरुको दैनिक समय तालिकाका व्यस्त हुन थाल्छ जसका कारण उनिहरु पर्याप्त निदाउन पाउँदैनन् । यसले गर्दा पनि तौल बढ्न थाल्छ ।
(३) तनाव : विवाह पछि सुरुका दिनमा युवतीहरु तनावमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा भोक बढाउने हर्मोनको लेभल बढ्ने गर्दछ जसले तौल बढाउँछ । (४) सोचमा परिवर्तन : मानिसहरु विवाह पहिले राम्रो देखिनका लागि आफ्नो डाइट र फिटनेसमा पूरा ध्यान दिने गर्दछन् । तर विवाह पछि जीवनशैलीमा परिवर्तन हुने भएका कारण यस्ता कुराहरु छुट्ने गर्दछ जसले तौल बढ्छ ।
(५) उमेरको असर : आजकाल धेरैजसो मानिस २८–३० वर्षमा सेटल भएपछि मात्र विवाह गर्दछन् । जबकी अध्ययनका अनुसार ३० वर्षपछि हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजमको रेट कम हुन्छ जसका कारण तौल बढ्छ ।
ॐ लेख्दै वि.सं.२०७७ असार २७ गते शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस मनले चिताएको पुग्नेछ
तपाईको भाग्य परिवर्तन हुने र छिट्टै धनि बन्ने यी ५ संकेतहरु जान्नुहोस्
श्री मनकामना माताको दर्शन गरी हेर्नुहोस् आज मिति २०७७ साल आषाढ ०९ गते मंगलबारको राशिफल…..